सस्ता पर्यटकले मुलुकको प्रगति हुँदैन–डा. वाग्ले (भिडियो सहित) | himalayakhabar.com
सस्ता पर्यटकले मुलुकको प्रगति हुँदैन–डा. वाग्ले (भिडियो सहित)
11th Jul 2019, Thursday | २०७६ आषाढ २६, बिहीवार १०:४४
ड्यालस (टेक्सस) – राष्ट्रिय योजना अायोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. स्वर्णिम वाग्लेले डायस्पोराले मातृभूमिको अार्थिक विकासमा धेरै तरिकाबाट सहयोग गर्न सक्ने प्रष्ट पार्नुभएको छ ।
बुधबार टेक्ससको युलेसमा नेप्लिज चेम्बर अफ कमर्ससँगको अन्तरकृयामा डा. वाग्लेले व्यापार, लगानी, शैक्षिक क्षेत्र, प्रविधि नेपालको ब्राण्ड विस्तारमा सहयोग गर्न सक्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
नेपालको नाम र यसका विशेषताका बारेमा विदेशमा रहेका नेपालीहरूले प्रचार प्रसार गरेर लगानी, पयर्टन विस्तारमा ठूलो सहयोग गर्न सक्ने धारणा पनि उनले व्यक्त गर्नुभयो । नेपालमा अाउने पर्यटकको संख्या बढेपनि गुणात्मक र प्रति व्यक्ति खर्चका हिसाबले कमजोर रहेको चर्चा गर्दै वाग्लेले खर्च गर्नसक्ने पर्यटक बढाउन डायस्पोराले ठूलो मद्धत गर्नसक्ने बताउनुभयो ।
अहिले नेपाल अाउने पर्यटकले प्रतिदिन गर्ने खर्च ४४ डलरमात्र छ । अझै चिनिया पर्यटकले त विच्याट मार्फत उनीहरूले खर्च गरेको उतै लैजान्छन् भन्ने चर्चा पनि छ, उहाँले भन्नुभयो । सस्ता पर्यटकले मुलुकले अार्थिक विकास गर्न नसक्ने भएकाले त्यही अनुसार पूर्वाधार विकासमा जोड दिनुपर्ने धारणा उहाँको थियो ।
नेपाल राम्रो देश हो, घुम्न अाउनुस् भनेका भरमा कोही घुम्न अाउँदैनन् । प्रचार प्रसार र मार्केटिङ गर्न जरूरी छ, उहाँले भन्नुभयो ।
डा. वाग्लेको भनाइ सुन्न ड्यालस र वरिपरी बस्ने नेपालीहरूको उल्लेख्य रूपमा सहभागिता थियो । वाग्ले ज्ञान र अनुभवको हिसाबले निकै राम्रा अर्थ र योजनाविद्का रूपमा चिनिनुहुन्छ ।
जलविद्युत, सूचना प्रविधिबाट पनि नेपाललाइ अघि बढाउन सकिने धारणा उहाँको थियो । भुपरिवेष्ठित हुनुले पनि नेपालले ठूलो अार्थिक प्रगति हाँसिल गर्न नसकेको धारणा वाग्लेले राख्नुभयो ।
कार्यक्रममा चेम्बरका पदाधिकारीहरू, स्थानीय समुदायले सुझाव र जिज्ञासा राख्नुभएको थियो । युलेसको फिस्टेल रेस्टुँरामा अायोजित कार्यक्रममा सहभागीहरूले निकै शान्त र गंभीरताका साथ डा. वाग्लेको अनुभव र प्रस्तुतीलाइ सुनेका थिए ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व सदस्य डा. स्वर्णिम वाग्ले संगको अन्तरकृया कार्यक्रमको प्रत्यक्ष प्रशारण भिडियो हेर्नको लागि यहाँ थिच्नुहोला >> भाग १
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व सदस्य डा. स्वर्णिम वाग्ले संगको अन्तरकृया कार्यक्रमको प्रत्यक्ष प्रशारण भिडियो हेर्नको लागि यहाँ थिच्नुहोला >> भाग २
राँझा । नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका–२ घरबारीटोल निवासी ३६ वर्षीया ललिताकुमारी लोधको श्रीमान्को कुटाइबाट मृत्यु भएको छ । श्रीमान् शिवकुमार लोधले ड्रममा लुकाएर ...
२०७६ आषाढ २७, शुक्रबार ०२:१५